प्राङ्गारिकमा मात्र जाँदा उत्पादन दोब्बर हुँदैन
आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटलाई सरसर्ती सुन्दा औसतमा राम्रो लागेको छ ।
बजेटमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको दस्तावेज छ । संघीयताको अवधारणा अनुरूपको बजेट आएको हो भन्न सकिने आधार नभए पनि यसमा केही राम्रा पक्ष पनि समेटिएका छन् ।
रेल वा पानीजहाज ‘मेड इन नेपाल’ लेखिएका सामानले भरिनुपर्छ
चालू आर्थिक वर्षमा व्यापारघाटा ११ खर्ब पुग्ने देखिएको छ । बजेटले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने र आयात घटाउन आयातित वस्तुमा कर बढाउने नीति लिएको छ ।
बजेट कथा, बजेट व्यथा
सरकार फेरिए, व्यवस्था फेरियो, पार्टी फुटे, पार्टी जुटे तर अर्थतन्त्रका धेरैमध्ये केही एजेन्डा उस्ताको उस्तै रहे । हरेक वर्ष बजेट आउँछ अनि झिनो आर्थिक वृद्धिको आशा देखाइन्छ ।
सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू बजेटअगाडि पेस गर्ने चलन छ, जसबाट आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम तथा प्राथमिकताहरू प्रतिबिम्बित हुन् । यसले नै आउने बजेटका आधारहरू निर्धारित गर्ने गर्छन् । यसपल्ट पनि सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम पेस ग¥यो ।
आर्थिक विकासका देखाउने र चपाउने दाँत
देशले योजनाबद्ध आर्थिक विकास थालेको ६२ वर्षमा देशभरिमा जम्मा १३ हजार १४९ किलोमिटर कालोपत्रे सडक पुगेछ, अझ सरकारी स्तरबाट बन्ने ‘कालोपत्रे’ कस्तो हुन्छ भनिरहनु पर्दैन ।
जिल्लामा हुने सबै सरकारी कामकाज स्थानीय स्तरमै हुन थालेपछि अछाम सदरमुकाम मंगलसेन सुनसान हुँदै गएको छ । राज्यको पुनर्संरचनासँगै संघीयताको कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय तह बलियो हुँदा सदरमुकाम सुनसान भएको छ भने विकट गाउँहरूसमेत भरिन थालेका छन ।
नीति तथा कार्यक्रमको चक्षु
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मूलतः सरकारको वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम र दृष्टिकोणसँग जोडिएको विषय हो । सरकारको आर्थिक जीवन कस्तो हुने ? सरकारका आर्थिक गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढ्ने ? के–कस्ता नयाँ आयोजनाहरू अगाडि बढाउने ? के–कस्ता पुराना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने आदि तथ्यहरूको विम्ब वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले झल्काएको हुन्छ ।
राजस्व वृद्धि गर्न रिबेट खारेज
संघीयता कार्यान्वयपछि तेस्रो पटक बजेट आउन लागेको भए पनि आगामी बजेट पहिलो र पूर्ण रूपको संघीय बजेटका रूपमा आउँदैछ ।
राष्ट्रपतिको गाउमा पानीको जोहो गर्न कुवामा ताला
सुक्खा ठाउँमा खानेपानीको जोहो गर्न आकाशे पानीलाई पोखरी, ट्यांकी, खाल्डो बनाएर सञ्चित गर्ने तथा एकपल्ट ल्याएको खानेपानी फारो गरी चलाउने गरेको सामान्यजस्तै भइसकेको छ ।
पृथ्वीनारायण : दूरदर्शी अर्थशास्त्री
गोर्खाका राजा नरभूपाल शाहकी माहिली रानी कौशल्यावतीपट्टिका पाँच सन्तानमध्येका जेठा छोरा पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १७७९ पुस २७ गते (इ.सं. ७ जनवरी १७२३) यो धर्तीको उज्यालो देखे ।
नेपालका थिङ्क ट्याङ्क
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराइएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ को पहिलो चार महिनामा चार लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् ।
पर्यटनमा फेवा–रारा साझेदारी
पर्यटकीय नगरी पोखराको फेवातालसँग नेपालको सबैभन्दा ठूलो एवम् सुन्दर ताल राराबीच वातावरण एवम् पर्यटनसम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाले पर्यटकीय साझेदारिताको पहल सुरु गरेका छन् ।
यतिखेर नेपालको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू धनात्मक छैनन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले पनि यो तथ्य सार्वजनिक गरेकै छ । यद्यपि, संघीयतापछिको तेस्रो बजेट र वित्तीय संघीयताको सूत्रअनुसारको पहिलो बजेटको रेखांकन हुदैछ ।